Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » I-Omicron: Isisongelo esitsha okanye akukho nto ibalulekileyo?
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Omicron – olona tshintsho lutsha lusele lonakele iimarike kwaye lubangele ukuvalwa kohambo olusuka kwamanye amazwe akumazantsi e-Afrika – lunokuphazamisa ukuchacha okutsha kweshishini lehotele, ngakumbi ukuba izicwangciso ziqhubela phambili ekuqiniseni imigaqo-nkqubo yovavanyo, njengase-US.
Iimpawu zibonisa ukuba ukubhukisha iihotele kwixesha elizayo, iintlanganiso, kunye nezinye izinto ezinxulumene nehotele ziyakuchatshazelwa kulindelo olucingelwayo lwezithintelo zokuhamba ezizayo, nokuba kukuzinyanzelisa, kunyanzeliswe yinkampani okanye kugunyaziswe ngurhulumente, ngokutsho kweHotStats.
Idatha ka-Okthobha, eyayine-Delta kuphela yokujongana nayo, yabona ukuvela kwakhona okumangalisayo kuMbindi Mpuma, ixhaswe yi-Expo 2020 eDubai, uMboniso weHlabathi weentsuku ezili-182 owaqala ekuqaleni kuka-Okthobha kwaye uqhuba ukuya kuthi ga ngoMatshi.
Eminye imimandla yehlabathi ayikwazanga ukuphinda impumelelo yaseDubai kunye noMbindi Mpuma obanzi. E-US, ii-indices ezinkulu zazisephantsi kwamanani aphindwe kabini ngo-Okthobha ka-2021 v. Okthobha ka-2019.
Ukusukela ekunyukeni okukhawulezileyo kokuhlala ukusukela ekuqaleni konyaka ukuya ehlotyeni, ukuya encotsheni kaJulayi, ukuhlala. eU.S. ukusukela ngokungaphezulu okanye kancinci, umqondiso wokuba i-boom yolonwabo ayinakugcinwa kumanqanaba afanayo ngaphambili.
Emva kokuba iOstriya ibuyisele uvalo ngoNovemba 22, iye yayandisa de kwaba nge-11 kaDisemba, yaba lilizwe lokuqala le-EU ukuthatha lo manyathelo phambi kotyando lwe-COVID-19.
IPortugal iphinde yabuyisela izithintelo ezingqongqo, isenza imaski yobuso isinyanzelo kwaye igunyazise isatifikethi sedijithali esingqina ukugonywa okanye ukuchacha kwi-COVID ukuze ungene kwiindawo zokutyela, iithiyetha bhanyabhanya kunye neehotele.
Njengoko iAsia-Pacific iqhubeka nokuhlanganisa ukubuya kwayo, nayo, iqinisa imida ekuphenduleni i-Omicron specter. IJapan kule veki ibhengeze ukuba ilizwe liza kuthintela abantu abavela kwamanye amazwe, kwiiveki kuphela emva kokunciphisa izithintelo zabanini-visa, kubandakanya abahambi beshishini bexeshana kunye nabafundi bamazwe aphesheya. Kwaye iiPhilippines zithintele abantu abafikayo abavela kumazwe asixhenxe aseYurophu, kubandakanya iNetherlands, iBelgium neItali.
Kwelinye icala, njengoko iingcali ezininzi zokuhamba zicinga ukuba ingaba intsha Ukwahluka kwe-Omicron iya kuphazamiseka izicwangciso zokuhamba ngeeholide, uphando lwakutsha nje lwe-Medjet (olwenziwa phakathi kuNovemba, luthunyelwe kwisiseko sokungena kwi-imeyile sabahambi abangaphezu kwe-60,000), lubonise ukuba ukunyuka kwangaphambili kunye nokwahluka babengenabo abahambi abaleqa ukurhoxisa izicwangciso.
Ukususela nge-15 kaNovemba, ngaphezu kwe-84% yabo baphendule babe nezicwangciso zokuhamba ezizayo. I-90% ichaze isicwangciso sokuthatha uhambo lwasekhaya kwiinyanga ezilithoba ezizayo (i-65% kwiinyanga ezintathu ezizayo), kwaye i-70% ilindeleke ukuba ithathe uhambo lwamazwe ngamazwe kwiinyanga ezilithoba ezizayo (i-24% kwiinyanga ezintathu ezizayo). Ngelixa i-51% yabo ichaze ukuba izinto ezahlukeneyo zangaphambili kunye ne-spikes zichaphazele izicwangciso zabo zokuhamba zexesha elizayo, kuphela yi-25% yabaphenduli abachaze ukuba baye barhoxa ngenxa yabo.
Iziphumo ezongezelelweyo zibandakanyiwe:
• I-51% ithe iinguqu zangaphambili kunye ne-spikes sele zichaphazele izicwangciso zokuhamba zexesha elizayo (i-27% iphendule ngokuthi "hayi," i-23% ayiqinisekanga okwangoku).
• I-45% yathi ukosulelwa yi-COVID-19 kunye nezinto ezahlukeneyo yayiyinkxalabo, ngelixa i-55% idwelise ezinye izigulo, ukwenzakala, okanye izoyikiso zokhuseleko njengeyona nto ibaxhalabisayo.
• Kwabo baxhalabileyo nge-COVID, ngama-42% kuphela ababenexhala lovavanyo lokuba banayo kwaye abakwazi kubuya; Iipesenti ezingama-58 bezinexhala ngakumbi ngokulaliswa esibhedlele ngenxa ye-COVID ngelixa ungekho ekhaya.
• Uhambo lweshishini lwalusekude (indlela) esezantsi, kunye ne-2% kuphela ephendula ukuba uhambo lwabo olulandelayo luya kuba lolweshishini.
• I-70% izimisele ukuhamba nosapho, i-14% nabahlobo, i-14% iyedwa.
Njengesikhumbuzo, izithintelo zangoku ze-Omicron zase-US zisebenza kuphela kubantu bamazwe angaphandle. Kubemi base-US kunye nabanini bee-visa ababuyela e-US, iimfuno zokungena kwakhona zisafana: uvavanyo olubi lwentsholongwane ye-COVID kungekho ngaphezulu kweentsuku ezi-3 ngaphambi kokubuya ngenqwelomoya kubakhweli abagonywe ngokupheleleyo, hayi ngaphezulu kosuku olunye lwabakhweli abangagonywanga. Ulwazi oluthe vetshe ngeemfuno, kunye neenkcazelo “zogonyo ngokupheleleyo” zinokufunyanwa kwiwebhusayithi yeCDC.